जलवायु परिवर्तन भनेको के हाे ? – Digital Khabar
By जीवन शर्मा Last updated Mar 19, 2021
०६ चैत, काठमाडौं । मौसम सम्बन्धी गुणहरू, जुन विश्वको भूगर्भीय इतिहासमा धेरै पटक परिवर्तन गरिएको छ, जुन लगभग हजार अरब वर्षदेखि चल्दै आएको छ, भौगोलिक संरचना र पर्यावरणीय प्रणालीहरूमा स्थायी प्रभाव पारेको छ।
प्राकृतिक मौसम परिवर्तन जुन चौथो पटक (क्वाटरनरी) हिमनदी र अन्तर्राष्ट्रिय कालखंडमा भयो, जसको जलवायु र भौगोलिक प्रभाव सबै भन्दा राम्रोसँग परिचित छ, करीव करीव २ लाख बर्ष लाग्यो। यो अवस्था प्राकृतिक अवस्थाहरू अन्तर्गत भयो।मौसम परिवर्तन भनेको सबै क्षेत्र र समय मापनको दायरा भित्र औसत जलवायु मान र मानक विचलनमा देखिएको सांख्यिकीय परिवर्तन हो। परिवर्तन आन्तरिक र बाह्य कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। बाह्य कारकहरूमा पृथ्वी क्रस्ट चाल, सौर गतिविधि र सम्बन्धहरू, आन्तरिक कारकहरूमा एन्थ्रोपोजेनिक गतिविधिहरू सामेल छन्।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको परिभाषा बाहेक यसले मौसममा हुने परिवर्तनलाई एन्थ्रोपोजेनिक प्रभावको परिणामको रूपमा परिभाषित गर्दछ जुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वायुमण्डलको संरचना बिगार्न निम्त्याउँछ। यद्यपि, मौसममा मानव गतिविधिहरूको प्रभाव १६औं शताब्दीदेखि यता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
धेरै मानव गतिविधिहरूको परिणामस्वरूप ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन बढेको छ। स्वत: अनुकूलन क्षमता नाघेको नतिजाको रूपमा, अपर्याप्त प्राकृतिक चक्रले संचयको कारण दिन्छ। ग्रीनहाउस ग्याँस प्रभावलाई अझ विशेष गरी विश्वको उर्जा सन्तुलनमा देखाउँदछ। यसले अतिरिक्त सकारात्मक रेडिएटिभ तनाव पैदा गर्दछ र जलवायु गुणहरू परिवर्तन गर्दछ, तापक्रम बढाउँदछ।
जीवाश्म उर्जाको प्रयोग,
बढेको र बेहोश भूमि प्रयोग,
आजको मौसम परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंगको दायरा भित्र जाँच गरिन्छ।
मानव गतिविधिहरूको कारण मौसम परिवर्तन
वातावरणको साथ प्राकृतिक हरितगृह ग्याँसहरु को कारण ग्रीन हाउस प्रभाव मजबूत बन्छ। ग्रीनहाउस ग्यासको बोक्ने क्षमतालाई पार गरेर वायुमण्डलमा स .्कलनका कारण निम्न तह र मध्य ट्रोपसियर जस्ता तापमानमा तापक्रम बढेको कारण औद्योगिक प्रक्रिया, कृषि गतिविधि, वन फँडानी र जीवाश्म उर्जा स्रोतहरूको प्रयोग ग्लोबल वार्मिंगको महत्त्वपूर्ण कारणहरूमध्ये एक हो।
ग्लोबल वार्मिंगले हाइड्रोलिक चक्र,
हिउँ र हिमनदीहरूको पग्लने,
समुद्री सतह बढ्दो,
खडेरी र गर्मीका छालहरू आवृत्ति / गम्भिरताको हिसाबले,
अत्यधिक वर्षा र बाढीलाई अवलोकन ,
पारिस्थितिक प्रणाली र सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक क्षेत्र,
थप रूपमा, जीवाश्म उर्जा स्रोतहरूको उपयोगको परिणाम स्वरूप, ट्रपोस्फीयरमा जम्मा भएका एरोसोलहरूले बादलको मात्रा र परावर्तन गुणहरू परिवर्तन गर्दछ यदि तिनीहरूको सांद्रता परिवर्तन हुन्छ। यसले जलवायु चिसो को प्रवृत्ति मा नकारात्मक विकिरणको सिर्जना गर्दछ। थप रूपमा, ज्वालामुखी खरानी कणहरूले सूर्यबाट प्राप्त छोटो-तरंग विकिरणको निश्चित मात्रालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ, यसले ट्रपोस्फीयर र पृथ्वीलाई चिसो बनाउँछ।
केही जलवायु परिवर्तन अवलोकन गरियो
सन् १९८० देखि विश्वव्यापी औसत सतह तापक्रम, जुन प्रस्टै देखिएको छ, आज सम्म ०.७ डिग्रीले वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा तल्लो वर्ष १०५८-१९९८ थियो ।२००५ डिग्रीको विसंगतिको साथ। २०० डाटाको नतीजा ०.०४८५ डिग्री विपुलता विश्वभर र०.०६४८ उत्तरी गोलार्धमा विसंगतिमा प्रभावकारी थियो।
दैनिक न्यूनतम तापमान औसतमा प्रत्येक १० बर्षमा ०.२ डिग्री वृद्धि हुन्छ। १०० बर्षको विश्वव्यापी औसत सतह तापमान रैखिक प्रवृत्तिमा ०.०२डिग्रीको विसंगति छ।
यसले संकेत गर्दछ कि, १०० वर्षको अवधिमा दुई पटकको तापमान १०० बर्ष भित्र पुगेको छ। पछिल्ला ५० बर्षमा, यो वायुमण्डलको तल्लो र मध्य ट्रपोस्फियर तहहरूमा १०० वर्ष अघि तापक्रमको तुलनामा निकै उच्च छ। यो स्थितिले दुबै जमिन र समुद्रहरू र साथै तल्लो ट्रोस्पोफायरलाई असर गर्दछ। यो अवस्थाले तातो हावामा पानीको बाफ राख्ने क्षमता बढाउँदछ। १४० को दशकदेखि गरिएको अनुसन्धानहरूले महासागरहरूको औसत तापक्रम न्यूनतम गाेहिराइ मीटरमा गएको र जलवायुले उच्च रुपमा तातो उर्जा ग्रहण गरेको देखायो। यो तापक्रमले समुद्री विस्तारको गर्दछ, समुद्री सतह वृद्धि गर्दछ।
थप रूपमा, हिमाली हिमनदी र औसत हिउँ कभरमा अवलोकन गरिएको घट्ना तेस्रो टीएआर रिपोर्टमा समावेश छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि ग्रीनल्याण्ड र अन्टार्कटिक हिम ढालको क्षतिले समुद्री सतहमा वृद्धिलाई योगदान पुर्‍यायो र फ्लोटिंग ग्लेशियर जीभ, आइस शेल्फ र आम क्षतिको परीक्षण गरियो।
ध्रुवीय र मध्य अक्षांशको हिउँ कभर र हिमाली / समुद्री हिमनदीहरूको स्थानिक र भोल्युमेट्रिक कटौती द्रुत गतिमा जारी छ। समुद्री सतह र ज्वार मापनको नतीजाको रूपमा, यो प्रमाण २० औं शताब्दीमा ०.०२-२.२२ मीटरले वृद्धि भएको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। जबकि १०५८-१९९८ बीच समयावधि दरहरू १.-0, १२-२. मिमी / वर्ष हो। जबकि १ 0,२२ -१९६१ -२००३ समयावधि समयावधि दर २.१,३-२,३-.१९९३. मिमी / वर्ष निर्धारित गरिन्छ।
अनुमान गरिएको मौसम परिवर्तन र सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र, प्राकृतिक इको-सिस्टम र मानव स्वास्थ्यमा उनीहरूको सम्भावित नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र बढाउनु हो। ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउन वा नियन्त्रण गर्न नीति र उपायहरू लागू गरिन्छ ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउन र वा वैज्ञानिक र प्राविधिक, प्राविधिक दृष्टिकोण र उपायहरू र म्याक्रो नीति उपकरणहरू जुन निकट भविष्यमा लागू गर्न सकिन्छ।
केही पूर्वानुमान मौसम परिवर्तनहरू
जलवायु परिवर्तनको अन्तर् सरकारी प्यानल (आईपीसीसी) चौथो निर्धारण रिपोर्टमा आधारित सबै अनुमान र उत्सर्जन परिदृश्यहरूको परिणामको रूपमा, वातावरणमा सतहको तापक्रम र समुद्री सतहमा कार्बन डाइअक्साइड संचय २१ औं शताब्दीमा बढ्नेछ; भूमि र समुद्री बरफ / हिमनदीहरूले मात्रा र क्षेत्रको हिसाबले द्रव्यमान गुमाउने अपेक्षा गरिन्छ।
१०० बर्षको विश्वव्यापी औसत सतह तापमान डिग्रीले वृद्धि हुनेछ यदि सीओ २ ले दाेब्बर गर्दछ। धेरै SRES उत्सर्जन पूर्वानुमानहरु अनुसार, प्रत्येक १० बर्षमा ०.२ डिग्री तापक्रम हुनेछ।
यो पूर्वानुमान गरिएको छ कि अन्टार्कटिका, उष्णकटिबंधीय अफ्रिका, जाडोमा मध्य र उच्च उत्तरी अक्षांश र गर्मीमा दक्षिण र पूर्वी एसियामा वर्षा वर्षा बढ्ने छ। यो स्थिति क्षेत्रीय बृद्धि वा कम अक्षांशमा क्षेत्रीय कमीको दिशामा छ।
वर्षाको बृद्धिले स्थलीय क्षेत्रहरुमा पानीको बाफहरु बढाउने छ, परिणामस्वरूप जमिन र बहाव घट्ने छ। यो पूर्वानुमान मध्येको छ कि अर्ध शुष्क र सुक्खा क्षेत्रहरूको चौडाई वृद्धि हुन्छ र वर्षावमा अक्षांश र मौसमी बदलाव हुन्छ।
हिउँ र बरफ:
उत्तरी गोलार्द्धमा हिउँ कभर वितरण कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। समुद्री बरफ, बरफ ढाल, आइस क्याप, हिमनदी जस्ता संरचनाहरूको थर्मल विस्तारको परिणामस्वरूप व्यापक क्षति हुने क्रम जारी रहनेछ।
यद्यपि यो अपेक्षा गरिएको छ कि वर्षा भन्दा प्रवाहको बृद्धिका कारण ग्रीनल्याण्डको आइस शील्डले ठूलो मात्रामा गुमाउनेछ, र अन्टार्कटिक आइस शील्डले बहाव बढ्ने बृद्धि गर्नेछ। पश्चिमी अन्टार्कटिक आइस शील्ड पूर्वानुमान मध्ये एक हो कि यसले यसको स्थिरता गुमाउनेछ किनकि यो समुद्र सतहभन्दा तल छ।
स्टारद्वारा आधारभुत भविष्यवाणी भनेको समुद्री सतह १९९० २१०० -२००० बीच ०.० -0,0९- 0,८८ मिटरले बढ्ने छ।
सुनको आपूर्ति बढाउन तयार छौंः राष्ट्र बैंक
digitalkhabar ३१ चैत्र २०७७, मंगलवार १७:०१